Wararkii ugu dambeeyey Xaalada B/weyne & Ciidanka La Wareegay -News and information about Somalia
Home Warkii Wararkii ugu dambeeyey Xaalada B/weyne & Ciidanka La Wareegay
Wararkii ugu dambeeyey Xaalada B/weyne & Ciidanka La Wareegay
Sida ay inoo sheegeen ilo lagu kalsoon yahay Ciidamo Hubeysan ayaa waxay lawareegeen inta badan Xarumaha muhiimka ahaa Ee Magaalada Beled weyne.
Ciidankani ayaa ah kuwo katirsan Booliska HirShabelle kuwaas oo gadood sameeyey.
Waddooyinka Muhiimka ah ayey xirteen,waxaana sidoo kale ciidanka ay kusugan yihiin wadada aada Garoonka Diyaaradaha B/weyne iyo mida hormarta Cusbitaalka weyn.
Askarta gadoodka sameeyey ay ka cabanayaan in muddo ah oo aysan qaadan wax mushaar ah.
Saameyn ayey ku yeelatay Ciidankaasi dhaq dhaqaaqii Magaalada B/weyne mana jiro Mas’uul ka hadlay Arintaan.
Previous articleM/weynaha Puntland oo u duulay Kismaayo & Wararkii u dambeeyey, Jabiyeyna.
Next articleDowladda Kenya oo ka jawaabtay dacwaddii ay Soomaaliya u gudbisay QM
Dowladda Oo Walaac Ka Muujisay Dagaalkii Saakay Ka Qarxay Mudug
C/rashiid Khaliif “Mudane Madaxweyne Farmaajo waajibaadkaga ma ahan in aad cashar...